MB 2016 septambra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Septambra
Tamin'ny volana septambra (tamin'ity taona ity indrindra tamin'ny 3. Oktobra [d. Üs]) ny Jiosy dia mankalaza ny Taom-baovao, "Rosh Hashanah", izay midika hoe "lohan'ny taona" amin'ny teny hebreo. Anisan’ny fanaon’ny Jiosy ny mihinana sombim-boankazo, izay mariky ny loha-taona, ary mifanandrify amin’ny hoe “Leschana towa”, izay midika hoe “Mirary taona sambatra!”. midika hoe miarahaba. Araka ny lovantsofina dia misy ifandraisany ny andro firavoravoan’i Rosh Hashanah sy ny andro fahenina amin’ny herinandro famoronana, izay namoronan’Andriamanitra ny olombelona.
Ao amin'ny soratra hebreo ny 3. Bokin’i Mosesy 23,24 ny andro dia nomena hoe «Sikron Terua», izay midika hoe «Andro fahatsiarovana amin'ny fitsofana trompetra». Noho izany, io andro io dia antsoina matetika hoe Fetin'ny Trompetra amin'ny teny anglisy. Raby maro no mampianatra fa teo amin’i Rosh Hashanah dia notsofina in-100, fara fahakeliny, ny trompetra (trompetra vita tamin’ny anjomara iray), anisan’izany ny in-30, mba hilazana ny fanantenana ny amin’ny fiavian’ny Mesia. Manana shofar aho ary afaka milaza aminao aho fa sarotra be ny mamoaka naoty. Namaky aho fa tao amin'ny fanompoam-pivavahana fety Rosh Hashanah dia fanaon'ny mpisolo toerana voaofana raha toa ka tsy afaka nitsoka ny isan'ny famantarana trompetra ny voalohany.
Araka ny loharanom-baovao jiosy dia misy karazan'alika telo izay notsofina tamin'io andro io:
Teki'a - feo lava mitohy ho mariky ny fanantenana amin'ny herin'Andriamanitra ary ho fiderana fa izy no Andriamanitra (Israel),
Shevarim - feon-jazona telo tsy fohy fehezina maneho ny fidradradradrana sy ny fitarainan'ny fahotana sy ny olombelona lavo,
Teru'a - feo sivy haingana, toy ny statoato (mitovy amin'ny feon'ny famantaranandro fanairana) hanehoana ny fon'ny torotoro an'ireo izay efa nanatrika teo anatrehan'Andriamanitra.
Mikasika an'i Teru'a, hoy ny Talmud, "Raha misy fitsarana avy any ambany (fo torotoro) dia tsy ilaina ny fitsarana avy any ambony". Rabbi Moshe Ben Maimon (fantatra amin'ny anarana hoe Maimonides), angamba ilay manam-pahaizana jiosy manan-danja indrindra sy mpampianatra tamin'ny Moyen Orient, dia nanampy ity fepetra manaraka ity:
Tsy ampy ankoatr'izay Andriamanitra irery ihany no mpanjakako. Raha ny olombelona rehetra tsy manaiky an'Andriamanitra ho Mpanjaka, dia misy zavatra tsy ampy amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ampahany amin'ny fitiavako ny Tsitoha ny fanampiana ny tsirairay hamantatra Azy. Mazava ho azy fa fanehoana fiahiahiana lalina ny hafa izany. Saingy misy fiantraikany amin'ny fahatakarako manokana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra maneran-tany rehetra.
[Mitsoka ny trompetra - lehibe ny sary] Tandroka ondrilahy no nampiasain'ny Israely fahiny ho an'ny trompetrany; Saingy rehefa afaka kelikely dia nanjary toy ny nataonay ireo 4. Nianatra ny Mosesy 10, nosoloana trompetra (na trompetra) vita tamin’ny volafotsy. Voalaza in-72 ao amin’ny Testamenta Taloha ny fampiasana trompetra. Notsofina tamin’ny fotoana samihafa izy ireo: mba hampitandremana ny amin’ny loza, hiantsoana ny vahoaka hivory amin’ny fety, hanambara fanambarana ary ho fiantsoana hivavaka. Tamin’ny fotoanan’ny ady, dia nampiasaina ny trompetra mba hanomanana ny miaramila ho amin’ny iraka nampanaovina azy, ary avy eo mba hanomezana famantarana ho amin’ny ady. Nambara tamin’ny trompetra koa ny fahatongavan’ny mpanjaka.
Ankehitriny, ny kristiana sasany dia mankalaza ny andro trompetra ho andro firavoravoana miaraka amin'ny serivisy ary matetika mampifangaro izany amin'ny firesahana amin'ny hetsika ho avy - ny fiavian'i Jesosy fanindroany na ny fampakarana ny fiangonana. Na izany aza, mety ho tsara ny dikan'ireny fandaharana ireny momba ny fetibe, dia tsy hadinon'izy ireo fa efa nahatanteraka izay nasongadin'ity fetibe ity i Jesosy. Araka ny fantatsika dia vetivety io fifanarahana taloha nahitana ny Andron'ny trompetra io. Izany no nampiasaina hanambarana ny Mesia ho avy amin'ny olona. Mpaminany, pretra, lehilahy hendry sy mpanjaka izy. Ny trompetra nitsoka an'i Rosh Hashana dia tsy vitan'ny fanamarihana ny fiandohan'ny kalandrie isan-taona any Israely, fa koa manambara ny hafatr'ity fetibe ity: "Ho avy ny Mpanjakanay!"
Amiko, ny tena zava-dehibe amin’ny andron’ny trompetra dia ny fanondroana an’i Jesosy sy ny nanatanterahan’i Jesosy izany tamin’ny fiaviany voalohany: tamin’ny alalan’ny fahatongavany ho nofo, ny asa fanavotana, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany ho any an-danitra. Tamin’ny alalan’ireo “zava-nitranga teo amin’ny fiainan’i Kristy” ireo dia tsy vitan’ny hoe nanatanteraka ny fanekeny tamin’ny Isiraely (ny fanekena taloha) fotsiny Andriamanitra, fa niova mandrakizay koa. I Jesoa no lohan’ny taona – Loha na Tompon’ny fotoana rehetra, indrindra fa Izy no namorona ny fotoana. Izy no tabernakelintsika ary manana fiainam-baovao ao aminy isika. Hoy i Paoly: “Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro efa tonga vaovao » (2. Korintiana 5,17).
Jesosy no Adama farany. Nandresy izy teo amin'ny toerana tsy nahombiazan'i Adama voalohany. Jesosy no Paska ho antsika, ny mofo tsy misy masirasira ary ny fampihavanana antsika. Izy no (sy tokana) manala ny otantsika. Jesosy no Sabatantsika ahitantsika fitsaharana amin'ny ota. Amin'ny maha Tompon'ny fotoana rehetra azy, dia miaina ao amintsika izy ankehitriny ary masina ny androntsika rehetra satria miaina ny fiainam-baovao ananantsika miaraka aminy isika. Jesosy, Mpanjakantsika sy Tompontsika, nitsoka trompetra indray mandeha!
Miaina amin'ny fiarahana amin'i Jesosy
Andron'ny trompetra: andro firavoravoana natao tamin'i Kristy